US oo sare u qaaday weerarada Ciraaq - BBC News Somali
US oo sare u qaaday weerarada Ciraaq
9 Agoosto 2014
Image caption Mareykanka waxa uu xoojiyay duqeynta ka dhanka ah Daacish
Mareykanka ayaa laba weerar oo dheeraad ah ku qaaday kooxda Islaamiga ah ee ku xoog badan waqooyiga dalka Ciraaq. Waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sidaasi sheegtay.
Diyaaradaha duuliya la’aanta ah ee mareykanka iyo kuwa ciidamada badda ayaa weerar cayiman ku qaaday meel ku dhow magaalada Irbil, oo ah meesha uu ka dhacay weerarkii ugu horeeyay ee Mareykanka uu qaaday subixii Jimcaha.
Kooxda sunniyiinta ah ee Daacish ayaa ku xooggan qeybo kamid ah dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Daacish oo sidoo kalena loo yaqaano ISIS, ayaa qabsatay qeybo muhiim u ah Ciraaq.
Image caption Diyaaradaha ciidamada Badda ayaa weerarada ka qeybgalaya